John Kerry oo sheegay in xalka nabada Falastiin iyo Israiil ee... | Universal Somali TV
John Kerry oo sheegay in xalka nabada Falastiin iyo Israiil ee Laba-gobol oo halis ku jiro'
December 29 2016 14:33:56
John Kerry ayaa khudbad ku sheegay in dhul ballaarinta iyo degsiimooyinka sharci darada ah ee Israa'iil ee dhulka la haysto ee Daanta Galbeed ay halis ku tahay labada dal ee rajada nabada falastiin iyo mustaqbalka Israa'iil ee dimuqraadiyada, .
Xoghayaha arimaha dibada Maraykanka ayaa ka dhawaajiyay digniinta maalintii arbacada oo ah codsi kama dambaysta ah ee aragtida maamulka xilka kasii degaya ee Obama ee nabada u dhexaysay Israa'iil iyo Falastiin.
"Ajandaha dhul boobka ayaa qeexaya mustaqbalka Israa'iil Oo Ujeedadooda cadahay:. Waxay aaminsan yihiin hal gobol: Greater Israa'iil," Israil kaliya ayuu yiri Kerry.
hadalka uu ka jeediyay Washington DC ayaa imanaya kadib dhawr maalmod markii US ay go'aansatay in ay ka fogaadaan codbixintii qaraarka UN ee sidii loo joojin lahaa dhammaan hawlaha degsiimooyinka sharci darada ah ee Israel ee Daanta Galbeed iyo Bariga Quds.
Kan-xigaQaraxyo mataano ah oo ay ku dhaawacme...
Kan-horeGambia: Isbahaysiga mucaaradka oo she...
31,968,125 unique visits